” မင်းတို့ခေတ်ရောက်ရင် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ” မင်းတို့ခေတ်ရောက်ရင် “	15
” မင်းတို့ခေတ်ရောက်ရင် “
Posted by ခင်ခ on Dec 24, 2014 in Creative Writing, Poetry | 15 comments
kai says: ဒီနေ့ကပဲစလို့..
လူလူချင်း….. ဖူးမျှော်မာန်လျှော့ကန်တော့တာ.. မလုပ်ကြပဲနေလိုက်…။
နောက်တောက်လျှောက်…. တိုးတက်လာတဲ့မြန်မာပြည်ကို မြင်ရမယ်..။
ခင် ခ says: စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပြောရရင်တော့ သဂျီးရေ တောင်စွယ်နေကွယ်ရင် သတ်တော်ရှည်အမတ်တွေကို သတ်ချင် ချင်နော်။
aye.kk says: လူကိုလူလိုမြင်ပါမှ….။
aye.kk says: အမေက
အမေကထားဝယ်ကြိမ်လုံးနဲ့ ရိုက်တာ။စပ်သလားမမေးနဲ့ ။
လူကလူပဲလူလိုဘာလို့ နားမလည်ရလဲ အမေ့ကိုပြန်ပြောမိပါတယ်။
အခုတော့ အမေ့မေတ္တာ ကောင်းကောင်းနားလည် သဘောပေါက်ခဲ့တယ် ။
အချိန်တွေက ပြန်မရတော့ဘူး။ သင်ခန်းစာပါဘဲ။ ကိုယ်ကခြေညိုးရှည်တဲ့သူလေ။။
ခင် ခ says: လူကို လူလို မြင်တတ်ဖို့ဆိုတာ အတန်းအလွှာခွဲခြားမှုကင်းမှ ဖြစ်မှာဆိုတော့ကာ အင်း အပေါ်ကသဂျီးပြောသလို ဖူးမျှော်မာန်လျော့ကန့်တော့ တာတွေများ များလေရော့လား အမအေးရေ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အဟမ်းးး
မီးထိန်ထိန်ညီးဖို့. . .
ကျနော်တို့နိုင်ငံထဲက စွမ်းအင်တွေ ပေးနေရတာကိုပဲ
ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီး ကျေနပ် နှစ်သိမ့်နေကြတော့မလားးးးးး
ဘယ်လောက် လင်းသလဲ ကြည့်ဖို့
ကိုယ့်ဘက်ကမ်းကမီး ငြှိမ်းကြည့်နေတာပါ လို့ပဲ
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများထက် နောက်ကျတာ
တလွဲမာနနဲ့ ထုံကြ အကြ ဦးမလားးးးးး
ခင် ခ says: ဖြည့်တွေးတတ်ပုံလေးတော့ သဘောကျမိပါ၏ဗျာ ကိုအလင်းဆက်ရေ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အဲ… အစိမ်းလေးနဲ့ လှထာ… ။
စိမ်းထားတဲ့အတွက် ဇူးဇူး လေးခ
naywoon ni says: ကျုပ်​ဘဂျီး ဘုရားရှငိခိုးပီးတိုင်း ​ကြေစည်​ထုတယ်​ဗျာ ” မထင်​” ဒဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: “မင်းတို့ ခေတ်ရောက်ရင်” ကြီး ကို မျိုးဆက်တိုင်းဆီ လက်ဆင့်ကမ်း တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်နေရပါပေါ့ ကိုခရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: Commentသူတို့ခေတ် အတွက်
ကျနော်တို့ ခေတ်မှာ တိုက်ပွဲဝင်ရလိမ့်မယ်။
အတွေးလေး says: မင်းတို့ခေတ်လည်း ဒုံရင်းဒုံရင်း ထင်တာပဲ ကွယ်
manawphyulay says: ဆရာအော်ပီကျယ် အင်းစိန်စာပေဟောပြောပွဲတုန်းက ပြောတာလေး သွားသတိရမိတယ်။
လွန်ခဲ့သော နှစ် ၃၀က အင်းစိန် ဂျီတီစီတက်တုန်းက ဒီမြို့သစ်လေးမှာ မီးလေးတွေ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်နဲ့တဲ့။ ဟော အခုလည်း သူ ပြန်လာရော မီးလေးတွေက မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်ပါပဲတဲ့ သူ ပြောနေတုန်း ဗြုန်းဆို မီးပျက်သွားရော….. နောင်တစ်ချိန်ဆိုရင်ကော…. ဒီလိုပဲ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်ပဲ ဖြစ်နေဦးမလားဆိုတာ……
uncle gyi says: လက်ဆင့်ကမ်းတယ်ဆိုတာယူလိုက်လို့လက်ဆင့်ကမ်းလို့ရတာပါ
kyeemite says: .တပ်မတော်သည် အမျိုသားနိုင်ငံရေးကို ဦးဆောင်သောအခန်းကဏ္ဍက ပါနေသ၍ …..ဝေးးးးးးးးနေအုံးမည်